भारतीय पक्षले लिपुलेकमा सडक बनाएको प्रति नेकपा मालेकाे आपत्ति ! « Bagmati Online
भारतीय पक्षले लिपुलेकमा सडक बनाएको प्रति नेकपा मालेकाे आपत्ति !
नेकपा (माले)ले भारतले मिचेकाे लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक लगायतकाे क्षेत्र फिर्ताका लागि कुटनैतिक पहल गर्न सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएको छ । शनिबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले भारतीय पक्षले सडक बनाउन लागेको भनेर पटकपटक सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले कुनै पहल नगरेको भन्दै लकडाउनकाे समय पारेर भारतीय पक्षले सडक उद्घाटन गर्नुले भारती चरित्र उदांगाे भएको बताएका छन । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फेरेसन मार्फत नेपाली भुभाग मिचेर बनाएको सडक उद्घाटन गरेको प्रति मालेले आपत्ति जनाएको छ । यस्तै मालेले भारतीय पक्षले मिचेकाे सम्पूर्ण भुभाग फिर्ता ल्याउने पहल थाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।